laacibfm.com » Man City Oo Ku Soo Laabatay Wadada Guusha Iyagoo U Awood Sheegtay Burnley Halka Ay Kaalinta 2aad Dib U La Wareegeen
Manchester City ayaa wadada guusha ku soo laabatay ka dib markii ay 4-1 ku xaaqeen kooxda Burnley oo marti loogu ahaa garoonka Turf Moor iyadoo kooxda Pep Guardiola ay dib ugu soo laabatay kaalinta labaad ee kala sareynta horyaalka.
Man City ayaa nasiinada ugu dirtay Burnley hal gool oo nadiif ah waxa uuna kulankaan ka tirsanaa wareegga 15-ad horyaalka Ingiriiska .
Labada koox ayaa biloowgii soo bandhigay ciyaar u furneyd waliba laheyd fursado waa weyn oo dhanka City ah balse uu u diiday goolhayaha Burnley .
City waxa ay soo bandhigeen ciyaar deg degsiimo leh iyaga ayaana kubadda ka haystay kooxda ay martida u ahaayeen kuwaasi oo kaliya ku tiirsanaa kubadaha rogaal celiska ah .
City si wacan ayay garoonka isugu balaariyeen iyaga ayaana ku sareeyay maamulka qadka dhexe xilli goolka kalia ee lagu nastay uu dhashay daqiiqaddii 24-aad waxaana si cajiib oo qajaf ah ku dhaliyay Gabriel Jesus .
Burnley waxa ay ku tiirsanaayeen kubadaha rogaal celiska ah mararka qaarna halis ayay ahaayeen , wax ayna City kulankaan qaab xoriyad leh u ciyaarayay De Bruyne kaasi kubado cajiib ah dhisayay .
City fursad xaqiiq ah ayay halayeen balse waxaa u diiday goolhayaha Burnley kaasi oo si la yaab leh u bad baadiyay , waxa ayna heerka kubad haysashada City ee qeybtaa shore gaartay %72
Soo laabashadii , City cadadis ayay saareen Burnley waxa ayna u nuglaayeen gool labaad kaasi oo yimid daqiiqaddii 50-aad waxaana dhaliyay Gabriel Jesus ak dib baas u ka helay Bernando Silva .
Sidaas oo ay tahay Burnley , isku dayo kala duwan ayay sameynayeen waxa ayna maciin bidayeen kubadaha rogaal celiska ah balse daafaca City durba waa ay soo celinayeen waxa ayna sheekooyinkaas dhacayeen illaa iyo daqiiqaddii 64-aad
Mna City waxa ay u muuqatay in ay go`an guul mooyee wax kale aysan aqbalayeen waxa ayna Burnley saarayeen cadaadis illaa gool sedexaadoo indho daraandar ah uu dhaliyay Rodri daqiiqaddii 68-aad, waxa ayna City badalkoodii ugu horeeyay sameeyeen daqiiqaddii 72-aad iyadoo la saaray Raheem kaasi oo lagu badalay Mehraz .
Kooxda Burnley waxaa ku adkaa in si sax ah ay kubadda u jiidaan , durbana waa la soo celinayay , waxa ayna dhamadkii ciyaarta u muuqatay mid iska degtay inakstoo City mar waliba goolal raadis aheyd, waxa ayna daqiiqaddi 85-aad soo giliyeen Eric Garcia oo loo badalay Fernandinho.
Daqiiqadihii geerida , dadaalkoodii iyo maamulkii kubadda waxa ay ku keeneen gool 4-aad waxaana dhaliyay Mehraz kaasi oo badal ku soo galay ciyaarta waxa uuna goolkaas dhashay daqiiqaddii 87-aad bale Burnley gool ayay dhaliyeen daqiiqadidi 89-aad, waxa ayna guud ahana ciyaarta ku dhamaatay afartaas gool ee ay City laheyd.